I-Sinthetics Doll 148cm D yeNdebe yeSilicone yeNtloko ye-Evo Skeleton Jelly Breast kunye ne-Face S Makeup
Oonodoli baseYurophu,D indebe yoonodoli ngesondo,Oonodoli besini abancinci
Ibhanti: XY unodoli
Ukufakela iinwele: *
Hayi (+ $ 0)
Uhlobo lweXY (+ $ 270)
Uhlobo lwe-XY lweenwele1
Uhlobo lwe-XY lweenwele2
Uhlobo lwe-XY lweenwele3
Uhlobo lwe-XY lweenwele4
XY Yakhelwe ngaphakathi1
I-XY Pubs (+ $ 40)
XY Ijeli yebele
Ukufudumeza kunye nokukhala: *
Ewe (+ $ 150)
Umzobo womzimba: *
Ewe (+ $ 240)
Ndifuna ukuthumela intombi yam ekhaya ivela kwisikolo samabanga aphakamileyo. Ndinxibe izihlangu zam zeCarhartt nezihlangu zomsebenzi. Unxibe ijean entle e-skinny ne T-shirt emhlophe. Xa sasihamba esitratweni, ndamisa ekoneni ukwala igadi ephambili, kwaye xa ndiqala ukwehla, ayizange ishukume. Masambe siye endaweni yakho, watsho encumile. Kulungile, nditshilo, ndiye ndajika ke saya kwisakhiwo esikhulu kwakhona sade safika kwam.
❤ Sinokhetho olukhulu lokukhetha XY unodoli ngobukhulu obahlukeneyo kunye nezitayile.
I-170cm yekomityi ye-silicone intloko kunye nobuso be-S makeup jelly esifubeni isabelEV ...
ibali langemva: Ufikile kwikhawuntara yokuhlawula, unobhala wenkundla wambiza ngegrosari, kodwa intsini yamxelela ukuba akukho ntlawulo yekomkomere kuba wolule iminwe yakhe kwijusi equkuqela emilenzeni yakhe, emva koko wafaka iminwe eqatywe imilenze yakhe. umlomo wancuma Ethetha ngawe...
168cm C ikomityi ye-silicone intloko ye-EVO skeleton ubuso S makeup jelly esifubeni ...
ibali elingasemva: Le asiyiyo yodwa imtyholwa ngokuchasene naye. Abafundi bakhe babemsa kwiindawo zikawonke-wonke baze bamnyanzele ukuba azibhence. Ngomnye uMgqibelo, wayenxibe izihlangu ezimnyama ezisicaba, isiketi esimnyama esifutshane kakhulu, kunye nehempe ekhanyayo emhlophe engenakhola engenamikhono. Bamthatha bamsa kwindawo...
I-168cm yeC Cup yeSilicone kwiNtloko yoBuso S Makeup EVO Skeleton Jelly Chest ...
ibali elingasemva: Kwimizuzu elishumi emva koko, yatshiza incindi yobudoda emathunjini akhe. Wathi xa ehamba phambi kwakhe, wafaka inyama yakhe elindle kunye negazi emqaleni wakhe waza wamfaka ubuso kabuhlungu de wabuya kwakhona. Wakhala engalawulekiyo. Inkokeli ebhinqileyo eklasini yabuza amantombazana athile ...
I-155cm intloko yeSilicone ye-A-indebe ye-Narcissus Bezlya Dolls
Ibali lemvelaphi: Uchama emlonyeni wakhe kwaye akanandlela yimbi ngaphandle kokuyiyeka iye ezantsi emqaleni kwaye ingene esiswini, kuba ezinye zihamba ziphuma emlonyeni wakhe ziye esilevini kuye kwilungu lobudoda. Emva koko uyarhoxa kwaye ujonge intombi yakho ifuthaniseleke kwaye ilinganise kwaye ekugqibeleni igabhe, uyibambe kwisitya. ...
Ibali lemvelaphi: Ukhuphe isikhalo ezimbalwa, kwaye ezi zikhalo zeza ekhasethini. Xa wakhe wawutyhala umthondo wakho ngokungaphezulu nangakumbi kwi-esile lakhe, wakhala. Uye wamfaka ngamandla kwade kwaphuma igazi kulomngxunya. Isetyenziselwa ukuthambisa kuphela ipeni yakho. ❤ Oonodoli bethu bokwenene benziwe ...
I-158cm yekomityi yobuso be-S i-makeup ye-EVO skeleton ye-silicone intloko yeentyatyambo i-smal ...
ibali lemvelaphi: Kuyo nayiphi na imeko, xa ndihamba ukuya esikolweni, ndabona ukuba uCourtney nonina babe malunga neeyadi ezingama-75 phambi kwam. Ungumfundi wesikolo samabanga aphantsi. Ndingumfundi wesibini. Ndifanele ukuba ngumdala, kodwa umama akanjalo. Manditsibe amanqanaba amabini (2-3) Ewe, nam ndikrelekrele. Ndicinga ukuba ndi...
170cm yeE Cup yoBuso S Makeup EVO Skeleton Jelly Chest Wheat Silic ...
ibali elingasemva: Ndinxiba ijean okanye iibhulukhwe ezimfutshane kunye nesikipa. Ngenxa yobukhulu bam, andithandi ukungcangcazela kakhulu, ngoko ke ndizama ukuvala phantse unyaka wonke. Nangona kunjalo, kufuneka ndisebenze kwifama yomhlobo emva kokuphuma kwesikolo., Yindlela emfutshane, nditsibe kwindawo yam, kodwa phakathi, ndicinga ukuba kufuneka ndihambe ukuze ndikwazi ...
ibali lemvelaphi: Ndiyazi ukuba nangona izandla zam zibanda ngokwenene, watsho. Thatha iiglavu zam, uxolo, ifama imdaka kancinci, kodwa ishushu kakhulu, ndazikhulula ndamnika. Enkosi ngokungabi namibuzo ndiphendule. Sithe xa sisondela kumnyango ongasemva, waqalisa ukutyibilika kwiqhekeza...
148cm D Cup EVO Skeleton Jelly Chest Silicone Head Head S Makeup ...
ibali elingasemva: Ngobo busuku, xa kwakukho imvula enkulu, imvula, neendudumo phandle, ndaphupha uZane. Kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo, ekubeni ndandithotywe isidima, ndidandathekile yaye ndingabukhathalelanga ubomi bam, ngokufuthi bendinamaphupha amabi namaphupha amabi angapheliyo. ❤ Oonodoli bethu bokwenyani benziwe ngokukhuselekileyo kwaye abanayo ityhefu ...
I-140cm ye-B ikomityi ye-silicone intloko yamathambo i-jelly bust ubuso S makeup EVO ...
ibali elingasemva: Ndadibana namakhwenkwe amaninzi amahle kakhulu. Ndiyathemba ukuba ndinexesha namandla okuba ndibazi ngakumbi ndize ndiqhelane namakhwenkwe abo. Ukuba ndihlala ixesha elide kwimpembelelo kunye nobukho babo, ndiza kuyithanda le nkwenkwe ngokungenakuzinceda. Kodwa ke ndahlala kude nabo kwaye ndemka ngokupheleleyo ...